Podcasting wuxuu sii wadaa inuu ku koco caannimada iyo lacag abuurka | Martech Zone
Waxaan heysanaa qiyaastii 4 milyan oo soo degsasho ah 200+ dhacdooyin Podcast suuq geynta ilaa maanta, waana sii kordheysaa. Aad iyo aad baan u maal gashanay kuweena istuudiyaha Podcast. Runtii waxaan kujiraa wajiyada naqshadeynta a cusub istuudiyaha oo laga yaabo inaan u guurayo gurigeyga tan iyo markii aan is arkay ama aan kaqeyb galayo ama aan wado barnaamijyo badan oo podcast ah.
Laga soo bilaabo bilowgiisii ​​hoose ee 2003, duufinta waxay noqotay awood aan laga hor istaagi karin suuqgeynta waxyaabaha ay muujineyso mana muujineyso calaamado joogsi ah - tirada boodhadhka firfircoon ayaa cirka isku shareeray ilaa 2008. Jon Nastor
2018 Podcasts Tirakoobka
Dhegeystayaasha Podcast waxay dhagaystaan ​​celcelis ahaan 7 bandhig toddobaadkii, taas oo kor u kacaysa 40% illaa 2017
Waxaa jira 550,000 oo fiidiyowyo firfircoon oo ku jira in ka badan 100 luqadood oo leh 18.5 milyan oo dhacdo oo laga heli karo khadka tooska ah
5-ta nooc ee ugu sarreeya ee wax lagu qoro waa bulshada & dhaqanka, ganacsiga, majaajillada, wararka & siyaasadda, iyo caafimaadka
64% dadka Mareykanka way yaqaanaan ereyga podcasting
44% dadweynaha Mareykanka waxay dhagaysteen Podcast, 26% waxay dhagaystaan ​​Podcasts bil kasta, 17% usbuucii, oo ay la socdaan 6% taageerayaal xamaasad leh
Tirada dadka ee muhiimka ah ee Podcasts waa 25-34 sano jir, badiyaa waa dad dhib badan oo adag in lala gaaro xayeysiinta
Dhagaystayaasha Podcast waxay u badan tahay inay haystaan ​​shahaadada kulliyadda iyo 45% inay u badan tahay inay helaan dakhli sanadle ah oo ah $ 37 ama ka badan
Muxuu Beddelayaa in Faylasha Faaiidooyinka ay caan ku yihiin?
Dib ugu noqo dhowr sano iyo qaadashada Podcasts waxay ahayd hawl adag. Haddii aad haysatid qalab macruufka ah, waa inaad ku xirtaa oo aad isku dubarideysaa qalabkaaga iTunes ka dib markii aad ka diiwaangashato qoraalada aad jeceshahay. Si kastaba ha noqotee, maaddaama aaladuhu ay horumarsan yihiin oo isku xirnaanta khadka ballaadhan ay noqdeen wax caadi ah Streaming Podcasts-ka ayaa noqday wax caadi ah. Apple ayaa leh barnaamijka podcasts, sidoo kale waxaa jira Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, iyo barnaamijyada moobiilka ayaa si fudud ula midoobi kara ciyaartoyda.
Dhegeysiga inta lagu gudajiro orodkaaga subaxnimo ama baaskiil wadista galabtii, isdhexgalka bilaa micnaha ah ee taleefannada casriga ah iyo gawaarida ayaa sameeyay podcast dhegeysiga shuruud subaxnimadii iyo galabtiiba. Fikradayda, waxaan aaminsanahay in tani ay ahayd meesha ugu weyn ee kobaca ee leh ganacsiga ganacsiga.
Kaliya maahan isticmaalka inuu beddelo, sidoo kale dabeecadda ayaa isbadasha. Sida dadku u fadhiisan doonaan oo u daawan doonaan Netflix saacado, waxaan ogaanay in dhagaystayaasheena ay dhegeysan doonaan saacado ka mid ah fadhiyadayada hal fadhi. Ku dar tan tan cusub ee isdhexgalka maqalka ee gawaarida sanadka 2016 kuwaas oo cuni kara kaydinta audio iyo codka la dalbanayo ayaa ka duuli doona sida aynaan waligeen u arag!
on the wax soo saarka dhinaca, Podcasting-ka ayaa sii fududaanaysa. Waxay u baahnaan jirtay istuudiyaha cadeynaya codka, makarafoonada qaaliga ah, iyo qas aalaha wax lagu duubo… ka dibna loo sii gudbiyo tifaftiraha maqalka si loo jaangooyo loona hagaajiyo Waxaan dhawaan ku sameeyey qaar ka mid ah podcasts wadada la a Dhaweeye H6 taariikhqorihii iyo go'an Shure makarafoonnada SM58 - iyo sida ay u cadyihiin Podcodka waxay ahaayeen kuwa cajiib ah. Heck, waxaad ku bilaabi kartaa adiga Barroosinka barnaamijka 'Podcory', iyo headset wanaagsan oo Bluetooth ah ayaa si weyn u shaqeynaya.
Isticmaalka warbaahinta ayaa muujineysa calaamado muujinaya inay si weyn u badaleen tikniyoolajiyadda iyo astaamaha cusub. Adeegga mobilada ee sii kordhaya sida 'shaashadii ugu horreysay,' iyo sidoo kale kor u qaadista qaabab kale oo ka kooban, sida boodhadhka iyo 'bingeable' waxyaabaha laga helo adeegyada fiidiyowga ee la dalbado ayaa hoos u dhigaya khuraafaadkii ahaa in dareenkeennu gaaban yahay. Tom Webster, Edison Madaxweyne Ku-xigeenka Istaraatiijiyadda
Lacag-dejinta Podcasting: Way Dhacaysaa
Sanado badan oo aan duubey kadib, waxaan sidoo kale helayaa dakhli hufan oo aan soo mariyo qaar ka mid ah maalgaliyayaasha (mahadsanid XayeysiisCast). Sababtoo ah boodhadhkayga ayaa laga yaabaa inay helaan 10k + dhagaysiga bilaha soo socda, xayeysiiyayaashu waxay dhiibayaan dhowr boqol oo doolar qaybkiiba. Taasi uma muuqan karto wax badan, laakiin waxay ka dhigeysaa waqti ku habboon in la jadwaliyo, la duubo, lana daabaco boodhadhka. Oo ka duwan qoraalka iyo fiidiyowga, fayl gareynta ayaa u fiican xayeysiinta maxaa yeelay waxaad leedahay dhegeyste dareenka. Dabcan, waxaan hubiyaa in xayeysiiyayaashaydu ay muhiim yihiin oo qiimo u leeyihiin dhagaystayaashayda sidoo kale - waxaan u maleynayaa inay taasi fure tahay. Ma maqli doontaan aniga oo isku dayaya in aan ku iibiyo joodariyaal ah kan wareysiyada suuq geynta!
Haddii aysan jirin joornaallo caan ah oo ku jira warshadahaaga, waa waqtigii la bilaabi lahaa mid! Dhammaantood way ka socdaan halkan!
Tags: 2018edison cilmi baarisIABSuuqgeynta Suuqgeyntamusicoomphnielsencontent pacificqaybaha podcastisticmaalka Podcastkoritaanka Podcasttirakoobka Podcasttirakoobyada Podcastistuudiyaha Podcastpodcastingkoritaanka podcastingtirakoobka Podcastingpwc